Vaovao - Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny fitomboan'ny indostrian'ny fitafiana an-trano ao Shina dia nihena ary ny marika nentin-drazana efa antitra ………
Tao anatin'izay taona vitsivitsy izay dia nihena ny fitomboan'ny indostrian'ny fitafiana ao Shina ary efa antitra ny marika nentin-drazana ………
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fitomboan'ny indostrian'ny fitafiana an-trano ao Shina dia nihena ary ny marika nentin-drazana efa antitra, raha ny marika vao misondrotra kosa dia eo am-piandohan'ny fitomboany. Mandritra izany fotoana izany, marika iraisam-pirenena maro manana traikefa bebe kokoa amin'ny R&D, famolavolana, fantsom-barotra ary ny fiasan'ny marika no manafaingana ny fivelarana amin'ny tsena sinoa. Ankoatry ny tanàna ambaratonga voalohany dia miditra amin'ny tanàna faharoa sy fahatelo ihany koa izy ireo, mandroso ny fifaninanana mahery vaika amin'ny marika akanjo anatiny ary manery ireo orinasan-damba hiova ho setrin'ny toe-draharaha.
namintina ireo teboka indostrialy efatra niavaka izahay tsirairay avy:
Voalohany, somary ambany ny fidirana amin'ny akanjo mimba amin'ny tsena sinoa
Ny fomba fandraharahana ataon'ireo orinasam-pamokarana akanjo any Shina dia mizarazara betsaka amin'ny famokarana sy ny varotra fitafiana ary ny fanaingoana ny akanjo. Ny ankamaroan'ny mpanamboatra akanjo matetika dia mamokatra akanjo maodely mahazatra amin'ny habetsahana betsaka. Ny akanjo namboarina kosa dia mila ampifanarahana arakaraka ny toe-javatra iainan'ireo mpanjifa manokana. Izy io dia novokarina tsirairay ary mifototra amin'ny varotra. Tsy misy atahorana ny lisitra, saingy kely ny refin'ny fandidiana.
Faharoa, misy karazany telo ny orinasa fanamboarana akanjo an-trano
Amin'izao fotoana izao, ny orinasam-panamboarana akanjo an-trano dia mizara roa matetika: voalohany, misy studio couture na marika mpamorona, Ity karazana fanamboarana akanjo ity dia manana famokarana lava, vidiny avo lenta, vondrona mpanjifa kendrena avo lenta ary Vondron'olom-bitsy manaraka ny sasany amin'ireo marika akanjo hampivelarana ny tsipika akanjo manokana, indrindra ho an'ny mpanjifa vondrona amin'ny andiany kely, ny fahasarotana amin'ny serivisy mahazatra, toy ny fanamiana any an-tsekoly.
Fahatelo, ny satan'ny fampandrosoana ny sehatry ny fanamboarana akanjo marobe an'i Shina
voakasiky ny haavon'ny fanjifana sy ny fotoana fivelarana fohy, na dia mihatsara tsikelikely aza ny fanekena ny fanaingoana ny akanjo, tsy misy marika nasionaly eo amin'ny sehatry ny fanamboarana akanjo marobe, ary ny tsena anatiny mbola tsy matotra.
Raha ny momba ireo mpandray anjara amin'ny indostria dia nisy mpanamboatra lamba nanomboka niditra tamin'ny sehatry ny fanarahan-damba manokana ho an'ny akanjo manokana. Nanomboka nanao asa fanamboarana faobe ny indostria, ary ireo orinasa voatanisa izay nahavita zava-bita sasany (na efa notanisaina) indrindra
Fahefatra, ny fifanoherana misy eo amin'ny famokarana angon-drakitra sy ny faharanitan-tsaina mba hiatrehana ny personalization sy ny refy.